Warar - Hordhac kooban oo ku saabsan foornada lime ee taagan
Hordhac kooban oo ah foornada liinta ee taagan
Nuuradda iyo dhuxusha ayaa siday u kala horreeyaan loogu quudiyaa qasnadaha keydka forklift. Qeybaha hoose ee haamaha waxay leeyihiin hofer miisaamaya otomaatig ah. Ka dib markaad miisaamto sida ku cad qadarka kombiyuutarka, dhagaxa nuuradda iyo dhuxusha ayaa isku jira. Waxyaabaha isku dhafan waxaa lagu qaadayaa gaariga boodka iyada oo loo marayo buundada u janjeera dhanka sare ee liinta, ka dibna si siman ayaa loogu rusheeyaa foornada iyada oo loo marayo qalabka rarka iyo qalabka quudinta
Waxyaabaha ceyriinka ah waxay hoos ugu dhacaan ficilka culeyskiisa gaarka ah ee foornada. Qeybta hoose ee foornada, xididdada wax ku afuufa ayaa qaboojiyaa liinta hoose ee foornada. Dabaysha hoosta ka jirtaa waxay ku badalataa kuleylka lime waxayna galeysaa aagga calcining ahaan shidaal ka dib marka heer kulkeedu gaaro 600 darajo.
Nuuradda ka soo baxda dusha sare ee dabka ayaa ka gudubta aagga kululaynta, aagga calcining, iyo aagga qaboojinta, iyo falcelinta kiimikada oo dhammaystiran marka loo eego tallaabada heerkulka sare si ay ugu daadato kalsiyum oksaydh (lime). Intaa ka dib, waxaa laga siidaayaa qeybta hoose ee foornada mashiinka ashing disc iyo aaladda siideynta ash ee leh dheecaanka xiran, si loo ogaado dajinta dabaysha aan joogsiga lahayn.
Guud ahaan buuxi magdhawga miisaanka otomaatiga ah iyo xakamaynta hababka isku dhafka, calcining kilkinta iyo soo saarista liinta.
(1) Nidaamka otomaatiga ah iyo kan gacanta ayaa labaduba qalabeysan. Marka laga reebo hawlgalka gacanta ee sanduuqa hawlgalka goobta, dhammaantood waxaa lagu xakamayn karaa qalliinka kombuyuutarka qolka kontoroolka dhexe.
(2) Xogta dhammaan aaladaha (sida cabbiraadda cadaadiska, mitirka qulqulka, qalabka heerkulka) ayaa lagu soo bandhigayaa kombuyuutarka waxaana daabacan kara daabacadda.
(3) WINCC nidaamka qalliinka shaqsi-mashiinka ee qumman.
(4) Siemens Buuxi Nidaamka Miisaanka Miisaanka Qiyaasta, Miisaanka iyo Nidaamka Magdhawga.
(5) Astaamo lagu kalsoonaan karo oo liin dheriga lagu qiyaaso, sayid caqli badan iyo qalab kale oo lahaansho.
(6) Nidaamka kormeerka kamaradda goobta ku habboon. Sawirada waqtiga-dhabta ah iyo xogta kumbuyuutarka xakamaynta dhexe, waxay si sax ah uqabsadaan xiriir kasta oo khadka wax soo saarka ah.
(7) Nidaamka lagu kalsoonaan karo ee Siemens PLC, qalabka wax lagu beddelo iyo kombiyuutarka warshadaha laba heer microcomputer nidaamka caqliga.
(8) Deegaanka u roon. Marka loo eego siyaasadaha ilaalinta deegaanka iyo baahiyaha wax soo saar, waxaa lagu qalabeyn karaa nidaam daaweyn danbas iyo nidaam baab'in si loo gaaro qax sharciyeed.
Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,